Pejy an-tsary : Fitsidihana ny asa fanorenana ao Ambohitrabiby
Fitsarana manakaiky vahoaka sy fanajana ny zon’olombelona:
Fitsidihana ny asa fanorenana ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) sy ny Fonjabe ao amin’ny kaominina Ambohidrabiby, Distrika Avaradrano, notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana ,Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza. Ity Fonjabe ity dia miorina amin’ny velarantany 9000m2, amin’ny faritra mitotaly 4 Ha, hisian’ireo toeram-ponenan’ny Mpandraharahan’ny Fonja, sy ireo fotodrafitrasa ilaina. Hahazaka voafonja 1.000, ary manara-penitra.
Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tao amin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ao Morondava.
Fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza,tao amin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ao Morondava.
Pejy an-tsary : Fanatrehana ny lanonana famindrana fibaikoana tao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe (ACMIL)
Fanatrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, ny lanonana famindrana fibaikoana tao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe (ACMIL)